एक वडा एक उत्पादनको नारालाई सार्थकता दिन्छौ – Rajdhani Daily
एक वडा एक उत्पादनको नारालाई सार्थकता दिन्छौ
दानबहादुर थापा, अध्यक्ष, भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख
दैलेखमा चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । त्यसमध्यमै भगवतीमाई गाउँपालिका पर्छ । पूर्व र उत्तरमा जाजरकोट, पश्चिममा नारायण नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिका पर्दछ भने दक्षिणमा डुंगेश्वर गाउँपालिका रहेको छ । यो गाउँपालिकामा सात वडा छन् साबिकका पगनाथ, रुम, मेहेलतोली, जथनाथ, कट्टी र वडाभैरव रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको घरधुरी संख्या ३३५९ छ, भने जनसंख्या १८ हजार ७७८ रहेको छ । यहाँका युवा वैदेशिक रोजगार, जागिर, व्यापार, ज्यालामजदुरीमा संलग्न रहँदै आएका छन् । अधिकांश कृषि उत्पादन परम्परागत ढंगको नै रहेको छ भने केही कृषकले विशेषतः बजार तथा सडक सञ्जालका नजिकका कृषकहरूले भने आधुनिक ढंगले खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।
यस क्षेत्रमा खाद्यान्न, फलफूल सुन्तला तरकारी, मसला बाली, बाख्रापालन, आलुखेती, भट्टमास प्रचुर मात्रामा गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी केरा, ओखर, मौरीपालन, टिमुर खेती, भैसीपालन आदि पनि गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा गाउँपालिकाले गरेको काम र आगामी दिनमा गाउँपालिकाले गर्ने विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा राजधानी दैनिकका कमल शर्माले गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचन जितेपछि के गर्नुभयो ?
भगवतीमाई गाउँपालिकाभित्र प्रत्येक वडामा यातायातको पहुँच पुग्ने सडक सञ्जाल जोडिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न विद्यालयलाई समायोजन गर्नुका साथै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी रहने गरी विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न पहल गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन भएको र त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक भगवतीमाई गाउँपालिका माध्यमिक विद्यालय स्तरीय प्रथम अध्यक्ष कप तथा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलाडी छनोट प्रतियोगिता भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । भवन तथा शौचालय नभएका १२ वटा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण भएका छन् भने छात्राछात्रका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच कायम गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा औषधि खरिद गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका स्तर तथा वडा स्तरमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविर सञ्चालन भइरहेका छन् । यस गाउँपालिकाका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि १५ शøयाको अस्पताल निर्माणको कार्य आरम्भ भएको छ भने बिरामीलाई समयमै सहज ढंगले स्वास्थ्य सेवा पहँुचमा पु¥याउन एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गरिएको छ ।
व्यावसायिक कृषि र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सोहीअनुसारका कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कृषकहरूको उत्पादन र भण्डारलाई सुरक्षित गर्न विभिन्न ठाउँमा रस्टिक स्टोर तथा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना हुनुको साथै व्यक्तिगत फार्म र नर्सरीलाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए त ?
निर्वाचन अघि गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नै विभिन्न कार्यक्रम क्रमिक रूपमा सञ्चालन भएका छन् । यो क्रमिक हुने कुरा हो त्यस पनि हामी संघीयताको पहिलो अभ्यासमा छांै हाम्रा ऐन नियम र कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पहिलो र दोस्रो वर्ष गयो तथापि हामीले यो दुई वर्षको अवधिमा धेरै महŒवपूर्ण काम गरेका छांै । मलाई लाग्छ निर्वाचनमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताभन्दा हामी अझै राम्रो काम गर्ने प्रयासमा छांै र प्रतिबद्धता पूरा गर्दै जानेछांै ।
गाउँपालिका समृद्धिका लागि सम्भावना केके हुन् ?
गाउँपालिकाको समृद्धिको मुख्य आधार व्यावसायिक कृषि र पशुपालन नै हुन् । यसका साथै यस गाउँपालिकाभित्र स्लेट खानी प्रशस्त मात्रामा भएको हुनाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्लेट उत्खनन तथा निकासी गर्न सकिएमा आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको सिर्जना भई युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने ध्ययेका साथ हामीले स्लेट कटिङ गर्ने मेसिन खरिद गरेको छांै ।
अहिले विद्युत् अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यसलाई विद्युतीकरणका काम हुनेबित्तिकै हामी त्यसको काममा लाग्छौं । अर्को हामीसँग वनजंगल प्रशस्त मात्रामा छ । अर्को यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनाका लागि श्रम बैंक स्थापना गरी युवाहरूलाई परिचाालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्र जस्तै शहीद मयाराम स्मृति पार्क, जगनाथ हिल्स, शिवपुरी शिवमन्दिर, नयाँ मालिका मन्दिर, शिखरद्वारी र कचाली लेकमा आवश्यक लगानी गर्न सकेमा पर्यटकीय गन्त व्यस्थल बनाउन सकिनेछ ।
एक घर एक धारा नीति अवलम्बन गरिने
सबै वडामा विद्युत् लाइन विस्तार
१५ शøयाको अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा खोजी
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता
घोषणापत्रमा नमुना गाउँपालिका बनाउँछु भन्नुभएको थियो, नमुना गाउँपालिका हुने आधार केके हुन् ?
भगवतीमाई गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने आधार जिल्लाकै अर्गानिक मोडेल गाउँपालिकाका रूपमा घोषणा भएको छ । एक वडा एक उत्पादनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ । उज्यालो भगवतीमाई गाउँपालिका स्थापनाका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागसँग सम्झौता भई १० करोड ७ लाख ५१ हजार ७४० रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रियामा छ । एक घर एक धारा नीतिको अवलम्बन गरी नागरिकको स्वच्छ खानेपानी खान पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । गाउँपालिका स्तरमा १५ शøयाको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यति काम प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यी काम सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाको मुहार फेरिन्छ ।
स्थानीय तहले अहिलेसम्म कुनकुन कानुन निर्माण गरेको छ । कुन बाँकी छन् ?
गाउँपालिकाले तत्काल आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, आर्थिक ऐन, पूर्वाधार ऐनलगायत विभिन्न २४ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण भई लागू गरिएको छ । ऐन निर्माण भएपछि काम गर्न सजिलो भएको छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै भवन कहिलेसम्म बन्छ ?
भगतीमाई गाउँपालिकाको भवन नहुँदा अहिले भाडाको घरमा बसेको छ । हामीले गाउँपालिको भवन निर्माण गर्नका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ । हामी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्न लागेको छांै । आउने आर्थिक वर्र्षभित्र भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अन्तिमसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत सबै वडामा विद्युत विस्तार गर्ने भन्ने थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?
अहिले गाउँपालिका दुई वटामा मात्र साना जलविद्युत् आयोजना छन् । उक्त आयोजना केही वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि ३० लाख रकम विनियोजन गरेर मर्मत गरियो । मर्मत गर्दासमेत त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जिल्लामा सामुदायिक विद्युतीकरण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक बैठक बसेपछि अहिले सबै वडामा विद्युत् लाइन विस्तारका लागि पालिकाबाट १ करोडका बोलपत्र आह्वान भई काम सुरु भइसकेको र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागसँग १० करोड ७ लाख ५१ हजार ७ सय ४० को सम्झौता भई बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
गाउँपालिकामा १५ शøयाको अस्पताल बनाउने कार्य कहाँ पुग्यो ?
हामीले निर्वाचनको बेला १५ शøयाको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थियांै । त्यसका लागि १५ शøयाको अस्पताल निर्माणको लागि पहिला हामीलाई जग्गाको समस्या थियो । जग्गाको खोजी गरेपछि हामीले जग्गा दिने दाता फेला पारेका छांै । सबै जग्गा दातासँग समन्वय गरेर जिल्ला मालपोत कार्यलयबाट पास पनि गरिसहेको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार अनुदानमा भगवतीमाई गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत सहभागितामा १ करोड ६७ लाखबराबरको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । त्यो काम पनि छिट्टै नै सम्पन्न हुन्छ ।
देशव्यापी कर आंतक भयो भन्ने छ । तपार्इंको गाउँपालिकमा करको अवस्था कस्तो छ ?
देशव्यापी रूपमा प्रश्न उठेको कर आतंक जसरी व्याख्या गरियो त्यो अवस्था हाम्रोमा छैन । हामीले कर बढाएका छैनांै करको दायरा मात्र फराकिलो पारेको हौं । जनताले कर महँगो भन्ने अवस्था छैन । हामी कर बढाउने पक्षमा छैनांै बरु त्यसका लागि हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्नका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने अस्थामा छौं ।
अबको तीन वर्षपछि गाउँपालिकामा के फरक देख्न सकिन्छ ?
अबको तीन वर्षपछि यस पालिकाका सबै वडाका प्रत्येक बस्ती तथा घरमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको हुनेछ । १५ शøयाको अस्पताल निर्माण भई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि जिल्ला र प्रदेशका अस्पताल धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ । कृषि पेसामा व्यवसायीकरण भई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात भएको हुनेछ । गाउँपालिका केन्द्रदेखि प्रत्येक वडाका मुख्यको स्तरोन्नति भई १२ महिना यातायातको सुचारु भएको हुनेछ । पालिका स्तरमा एक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भई शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनेछ । यो गाउँपालिका कृषि र पशुपालनको हब हुनेछ । यस गाउँपालिकाको एक घर एक धाराको नीतिबमोजिम प्रत्येक घरधुरीले स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुग्नेछ ।
एक घर एक धाराको नीतिअनुसार सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सबैमा कसरी पु¥याउनुहुन्छ ?
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानेपानीका स्रोत केके छन् भनेर ग्रामीण जलस्रोत परियोजनामार्फत महुान खोज्ने काम भयो । मुहान खोजेपछि अहिले परियोजनाको तेस्रो चरणमार्फत प्रत्येक वडामा खानेपानी योजना निर्माणका काम भइरहेका छन् । हामीले एक घर एक धाराको निति अबलम्बन गरेका छांै । त्यो आगामी वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न भएर हामीले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेछ । पहिला यस्तो कार्यक्रम थिएन जिल्लाका जलस्रोत सल्लाहकार लक्ष्मीचन्द्र महतसँग समन्वय गरेर हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्न सफल भयौं । र अब छिटै नै जनताले आफ्नो घरमा खानेपानीको धारा स्वच्छ र सफा खानेपानी खान पाउनेछन् ।
निर्वाचन जितेपछि पाउने पारिश्रमिकसमेत नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने योजना छ ?
हो मैले निर्वाचन जितेपछि पाउने पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेको जनतामाझ गरेको थिए । म यो पाँचवर्षे कार्यकालमा कुनै पनि सेवा सुविधा लिन्न । कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको सेवा सुविधाअनुसार मैले अहिले छुट्टै खातामा जम्मा गरेको छु । त्यो रकमबाट गाउँपालिकमा रहेको विपन्न समुदायका बालबालिकालाई पढाउने खर्च गर्ने तयारीमा छु । त्यसका लागि कसरी छनोट गर्ने भन्ने योजनामा छु । खातामा पैसा आएको छ । त्यो चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको छु ।
Tags: नारालाई सार्थकता दिन्छौ